प्रधानमन्त्री सिरहा तर्फ जाँदै, यस्तो छ कार्यक्रम ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रधानमन्त्री सिरहा तर्फ जाँदै, यस्तो छ कार्यक्रम !
काठमाडौं, वैशाख ५ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार सिरहा जाँदै हुनुहुन्छ । कल्याणपुरमा रहेको रामदुलारी मावि पुगेर उहाँले एक बालिकालाई स्कुल भर्ना गर्ने कार्यक्रम छ ।५ वर्षकी मनिषाकुमारी मल्लिक डोमलाई उहाँले स्कुल भर्ना गर्ने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार देशभरमै कम साक्षरता रहेको डोम समुदायका बालबालिकालाई पढ्न पठाउने
अभियान अनुसार प्रधानमन्त्री आफैं स्कुल पुगेर बालिकालाई भर्ना गर्न लाग्नुभएको हो ।प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र निरक्षरता हटाउने अभियान अनुसार यसअघि मुगकी एक बालिकालाई स्कुल भर्ना गरिसक्नुभएको छ । मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिकाकी ६ वर्षीया थिल्ने साङ् तामाङलाई प्रधानमन्त्रीले १ गते स्कुल भर्ना गरिदिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र निरक्षरता हटाउने अभियान घोषणा गर्दै एक व्यक्तिले कम्तिमा एक जना विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना अभियानमा सघाउन अपील गर्नुभएको छ । यसअनुसार मन्त्री, सांसद तथा कलाकारले देशका बिभिन्न ठाउँका बालबालिकालाई स्कुल भर्ना गरेका छन् ।
सरकारले हिजो कर्णालीबाट विद्यालय भर्ना अभियानको औपाचारिक सुरुवात गरिसकेको छ । तर भर्ना अभियान सुरु गरेपनि अबको १५ दिनमा ३ लाख भन्दा धेरै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । शिक्षा विभागका अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समुहमा ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।
त्यसमा पनि ५ देखि ९ वर्षसम्मका ८८ हजार २ सय ७ जना बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना हुनुपर्नेछ । यी बाहेक झण्डै डेढ लाख विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भए पनि बीचैमा पढाई छाड्ने गरेका छन् । पढाई छाड्ने सबैभन्दा बढी तराईका दलित र गरीब बस्तीका बालबालिका छन् । जिविकोपार्जनको काम बच्चालाई समेत लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको परिवारले बताएका छन् ।
बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउनु र ल्याइहाले पनि टिकाउन चुनौती रहेको शिक्षाविद्को भनाई छ । सरकारले हरेक वर्ष बैशाख २ गतेदेखि १५ गतेसम्म विद्यालय भर्ना अभियान गर्दै आएको छ । यस्तै १६ देखि ३० गतेसम्म घरदैलो कार्यक्रम पनि गर्ने गरेको छ । तर पनि यी बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकः सबै यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय
पाल्पामा पहिरोले ६ घर पुरीए: ४ वर्षका बालक समेत बे प त्ता,
आज राति देखि भिषण वर्षा हुने, सचेत रहन आग्रह